Hashflare traikefa - Vaovao farany - Blockchain News
Nizaha toetra ny mpamatsy izahay Hashflare ho anao. Izahay hizara izany famerenana ny Hashflare traikefa. Mampiasa vola izahay ny manokana vola ao amin'ny mpamatsy tsirairay avy ary hampiseho anao ny valiny mangarahara. Ny mpamatsy Hashflare amin'izao fotoana izao no fantatra ho iray amin'ireo tsara indrindra fitrandrahana mpamatsy eo amin'ny vidy vola.
Amin'izao fotoana izao isika dia manana 1000.39 TH / s Sha-256 Bitcoin harena ankibon'ny tany
Noho ny vokatra tsara indrindra amin'ny ny mpamatsy Hashflare, efa hitafy be dia be amin'ny alalan'ny fividianana fanampiny. In tanteraka, efa vola momba ny $ 150,000 amin'ny fitrandrahana ao amin'ny Hashflare. Ao amin'ny fanazavana manaraka ireto ianao dia afaka mahita ny amin'izao fotoana izao ny fanompoana namandrika:
Ao amin'ny sary manaraka dia mampiseho aminao ny amin'izao fotoana izao vokatry ny harena ankibon'ny tany isaky ny TH / s:
Araka ny hitanao izao, mandray eo ho eo izahay amin'izao fotoana izao. 0.00014428 BTC (Bitcoin) isan-namandrika TH / s alohan'ny deducting ny fikojakojana ny vola lany. Izany no momba ny 0.14 BTC (bitcoin) andro amin'ny marina eo ambany 1000 TH / s. Eto dia afaka mahita ny vokatry tsy fikojakojana ny vola lany:
Eto indray ao isa, avy amin'ny 0,14011852 Bitcoin dia nakòn antsika ho fikojakojana 0,02317,904. Ny vokany dia izao no: 0.11693948 BTC isan'andro. Sady koa anie, 1288.87 USD isan'andro amin'ny tahan'ny fifanakalozana amin'izao fotoana izao – 11021.70 USD (26.01.2018)
Hashflare traikefa miaraka amin'ny fanohanana
Efa nanana traikefa tena tsara hashflare miaraka amin'ny fanohanana hatramin'izao. Ny fihetsiny, ny roa andro dia tokony ho voalahatra ny anao. Raha tsorina dia, na izany aza, hitantsika ny fisokafana ny mpanome eo amin'ny fantsona fanohanana samihafa sy ny tsara foana pejy Facebook ho toy ny lehibe miampy.
Indrindra fa lehibe ny fisokafana momba ny olona ao ambadiky ny orinasa. Zara raha nisy rahona mpamatsy efaha amin'ny isam-tena an-karihary izany. Ny tsara ho fantatra foana hoe iza ianao miresaka ny teo farany.
Hashflare traikefa miaraka amin'ny backoffice na ny tranonkala
Ny tranonkala dia fifadian-kanina sy ny birao indray no tena matihanina. Hatreto aloha, tsy misy rahona mpamatsy izay afaka manao izany toe-javatra maro. Raha ny asa fikojakojana dia tanterahina amin'ny tranonkala, ny mpamatsy dia hanome vaovao ao amin'ny vohikala sy Facebook, fakan-tahaka.
Experience ny vokatry ny harena ankibon'ny tany
Mazava ho azy, Hashflare dia tena soso-kevitra ho toy ny amin'izao fotoana izao Cloud mpandresy ny harena ankibon'ny tany. Tena afa-po amin'ny vokatra. Ato amin'ity famerenana sy ny fampitahana ianao dia afaka mahita ny valiny. Raha nanana traikefa tsara na ratsy amin'ny mpamatsy ity, dia aza misalasala ny mifandray aminay.
First-tanana traikefa tatitra
In fitsapana tatitra, dia miantehitra fotsiny amin'ny zavatra niainany amin 'ny hashflare. Ho hitanao ny fandraisana ho an'ny tsirairay ny fanambarana amin'ny endrika sary eo amin'ny tranonkala. Efa vola tena vola ao amin'ny tantara tsirairay, ary tena vokatra tatitra ihany. Ny fomba fitsapana mangarahara no tena zava-dehibe ho antsika. Mpamatsy iray ihany fa efa nizaha toetra, ary nizaha toetra ny tenantsika no nanolotra sy fizahana ny antsika.
Traikefa amin'ny payout amin'ny hashflare
Mazava ho azy, amin'ny farany, ny adihevitra momba ny payouts no zava-dehibe indrindra. ihany mpamatsy ny tena vokatry ny isa ao amin'ny birao indray miteraka ny tsara sy fanta-daza mpamatsy. Afaka hanamafy izany zava-misy miaraka amin'ny Hashflare miorina amin'ny amin 'ny traikefantsika. Ao anatin'ny 5 minitra ny Bitcoin dia eo amin'ny kitapom-batsy. Koa amin'io lafiny io, azontsika atao afa-tsy fahazoan-dalana ny rahona harena ankibon'ny tany mpamatsy.
Mazava ho azy, Ankoatra ny amin 'ny zavatra niainany, isika koa dia nitarika ny tsipiriany famerenana ny fikarohana. Mazava ho azy, dia mitady ny Internet ho an'ny scam, hosoka, na ny teny toy ny RIP-eny. Indrindra fa ao amin'ny tontolo miteny anglisy, toerana fitrandrahana rahona dia efa fantatra kokoa amin'ny anarana, Misy zavatra hafa traikefa.
Ny vokatry ny hashflare Review
Ao amin'ny Alemana sy ny fikarohana iraisam-pirenena ary koa ao amin'ny YouTube, dia tsy nahita na ratsy niainany amin'ny Hashflare. Ao amin'ny sehatra rehetra, dia nidera ny mpamatsy ho lehibe sy mahasoa. Toa toy ny Hashflare tsy nanao fahadisoana be loatra sy ny mpanjifa. Mazava ho azy, izahay tsy niankina tamin'i ireo soa aman-tsara ihany koa ny fijoroana vavolombelona fa nitarika ny fitsapana amin 'ny vola.
Author: Alexander Weipprecht
Amin'ny maha-manampahaizana manokana voaofana IT ho an'ny fampandrosoana fampiharana, Izy no nanoro hevitra nitarika orinasa rindrambaiko ho mihoatra noho ny 10 taona. Cryptocurrency no lasa zava-dehibe kokoa amin'ny raharaham-barotra sy ny mpampiasa vola. Alexander te-hanome ny olona rehetra miditra mora ny zava-dehibe.